मोरङ–४ का उम्मेदवार महेश आचार्यको उद्घोष– मैले जिते प्रदेश–१ को राजधानी विराटनगर बनाइदिन्छु - लुम्बिनी समाचार
मोरङ–४ का उम्मेदवार महेश आचार्यको उद्घोष– मैले जिते प्रदेश–१ को राजधानी विराटनगर बनाइदिन्छु
प्रकाशित मिती November 24, 2017 | Bishal Aryal
प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन मिति नजिकिएसँगै दलहरूले चुनावी प्रचारलाई तीव्रता दिएका छन् । खास गरी आसन्न निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस र वाम गठबन्धबीच मुख्य प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ । मोरङका ६ वटा निर्वाचन क्षेत्रमध्ये ४ नम्बर क्षेत्रमा पनि चुनावी प्रचारले तीव्रता पाएको छ ।
नेपाली कांग्रेसका नेता पूर्वमन्त्री महेश आचार्य यतिबेला मतदाताको घरदैलोमा पुगेर मत मागिरहेका छन् । मोरङ क्षेत्र नम्बर ४ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि उम्मेदवार बनेका आचार्य यतिबेला चुनावी अभियानमा जुटेका छन् । यसै सेरोफेरोमा रहेर नेता आचार्यसँग कोसी अनलाइनकर्मी किशोर विश्वकर्माले गरेको कुराकानी :
चुनावी प्रचारप्रसार कस्तो चल्दैछ ?
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन आउन अब केही दिन मात्रै बाँकी छ । मतदाताको बीचमा पुगिरहेको छु । बिहानैदेखि राति अबेरसम्म मतदाताकै बीचमा हुन्छु । घरदैलोमा पुग्दा मतदाताबाट पाएको प्रतिक्रियाले निकै उत्साहित पनि छु । यसले मलाई मात्रै होइन, समग्र कांग्रेसलाई नै उत्साहित बनाएको छ । समग्रमा हेर्दा कांग्रेसको पक्षमा जनलहर अत्यन्तै बढेको छ ।
चुनावका बेला हुने पार्टी प्रवेशलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
कांग्रेस भनेको विगत ७ दशकभन्दा लामो समयदेखि प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रका लागि संघर्ष गरेको पार्टी हो । देशको सबैभन्दा पुरानो पार्टी पनि कांग्रेस नै हो । यो देशको हरेक राजनीतिक परिवर्तनको नेतृत्व पनि कांग्रेसले नै गरेको छ । यसले गर्दा कांग्रेसप्रति जनताको भरोसा निकै छ । यो देशको आर्थिक समृद्धि यदि कुनै राजनीतिक दलले गर्छ भने कांग्रेस नै हो भन्ने आममतदाताले बुझिसक्नुभएको छ ।
तपाईंका चुनावी एजेन्डा के–के हुन् ? कसरी मतदातामाझ गइरहनुभएको छ ?
संविधान जारी भएसँगै अब नेपालमा राजनीतिक क्रान्ति पूरा भएको छ । ७ दशक लामो संघर्षपछि कांग्रेसकै नेतृत्वमा संविधानसभाबाट संविधान जारी भएको छ । अब त्यसको पूर्ण कार्यान्वयन गराउने मुख्य जिम्मेवारी पनि कांग्रेसकै काँधमा छ । संविधानको रक्षा गर्दै मुलुकलाई आर्थिक समृद्धिको दिशामा अगाडि बढाउनु कांग्रेसको दायित्व हो । खास गरी विकास निर्माणसँगै आर्थिक समृद्धिका मुद्दाहरू लिएर मतदाताको बीचमा पुगिररहेको छु ।
पूर्वअर्थमन्त्री पनि हुनुहुन्छ, यो क्षेत्रको विकासका लागि के छन् योजना तपार्इंसँग ?
यो क्षेत्रको विकासका लागि जोवनी–किमाथांका सडक निर्माण, विराटनगर विमानस्थलको स्तरोन्नति गरेर क्षेत्रीय विमानस्थल, आइसीपी, विराटनगर जुट मिल सञ्चालन, मोरङ–सुनसरी औद्योगिक क्षेत्र स्थापना, विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) को निर्माण, रिङ रोडलाई पूर्णता दिने, कटहरीसम्म रेलको लिङ्क जोड्ने, विराटराजाको दरबार क्षेत्रलाई पर्यटकीय क्षेत्र बनाउने, बाहुनी–नेताचोक हुँदै विराटनगरसम्मको सडकलाई स्तरोन्नति गरी कालोपत्रे गर्ने, सिंघिया खोलामा तटबन्ध निर्माण गर्नेलगायत थप्र्रै योजना छन्, मसित । यी योजनालाई मैले चुनावी एजेन्डाका रूपमा प्रस्तुत गरेको छु ।
विगतमा पदमा छँदा तपाईंले आफ्नो क्षेत्रमा के–के गर्नुभयो ?
तात्कालीन क्षेत्र नम्बर ६ र हालको ४ नम्बर क्षेत्रमा मैले दर्जनौं विकास निर्माणको काम गरेको छु । खास गरी जनताले हामीलाई विकास निर्माणभन्दा पनि संविधान लेख्नका लागि चुनेर पठाउनुभएको थियो । संविधान लेख्ने मुख्य दायित्व हामीले पूरा गर्यौं । साथमा विकास निर्माणका काम पनि गर्यौं ।
तपाईंको क्षेत्रमा आदिवासीहरूको बाहुल्यता छ, उनीहरूको कला, संस्कृति संरक्षणका लागि के छन् योजना ?
नेपाल भनेको विभिन्न जातजाति बसोबास गर्ने सुन्दर फूलबारी हो । सबै जातजातिको भाषा, कला र संस्कृति संरक्षण गर्नु हाम्रो दायित्व हो । हरेक प्रदेशमा एउटा भाषा, कला र साहित्य हेर्ने एकेडेमी स्थापना गर्ने कांग्रेसको घोषणापत्रमै उल्लेख छ । त्यो एकेडेमीले हेर्ने गरी यो क्षेत्रमा आदिवासी, जनजातिको मात्रै होइन, अन्य जातजाति र धर्म समुदायका मानिसको कला र संस्कृतिको संरक्षण गर्नेछ ।
प्रदेशको राजधानीका विषयमा तपाईंको धारणा के छ ?
अन्य ठाउँका जनताको भावनालाई उनीहरूको चित्त नदुख्ने गरी प्रादेशिक राजधानी विराटनगर बनाउन कांग्रेस प्रतिबद्ध छ । र, १ नम्बर प्रदेशको राजधानी विराटनगर म पक्कै पनि बनाइदिन्छु । कांग्रेसको धारणा पनि यही हो । अहिलेको विराटनगरलाई मात्रै समेटेर भन्दा पनि बृहत्तर विराटनगरको अवधारणाअनुसार प्रदेशको राजधानी बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो सोच छ । दुहबी, इटहरी, विराटचोकलगायत क्षेत्रलाई समावेश गरेर बृहत्तर विराटनगरको अवधारणासहित विराटनगरलाई १ नम्बर प्रदेशको राजधानी बनाउनुपर्छ । यहाँको ऐतिहासिकता र भौतिक संरचनाको विकासका कारणले पनि विराटनगर प्रादेशिक राजधानी हुनेमा निश्चिन्त रहन विराटनगरवासीलाई आग्रह गर्छु ।
वाम गठबन्धनले र लोकतान्त्रिक शक्तिबीच कस्तो चुनावी प्रतिस्पर्धा हुने आँकलन गर्नुभएको छ ?
लोकतन्त्र र कांग्रेस एकअर्काका पर्याय हुन् । कांग्रेसलाई सिध्याउनु भनेको लोकतन्त्रलाई सिध्याउनु हो । यो जनताले बुझेका छन् । मंसिर २१ गतेपछि थाहा भइहाल्छ नि को पत्तासाफ हुन्छ भनेर । नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको वाम गठबन्धन के उद्देश्यका लागि भएको भन्ने जनताले थाहा पाइसकेका छन् ।
उनीहरूकै एउटै उद्देश्य हो दुईतिहाई ल्याएर संविधान परिवर्तन गरी मुलुकमा अधिनायकवाद लाद्नु हो । मुलुकलाई पुनः पछाडि धकेल्नु हो । नेपाली जनता सजग भइसकेका छन् । सत्ता प्राप्तिको गठबन्धन हो उनीहरूको ।
आर्थिक सम्वृद्धि र स्थिर सरकारका लागि बामगठबन्धन नै चाहिन्छ : लामिछाने
‘कर प्रशासन सुधारमा सरकार प्रतिबद्ध’
चुनावी मैदानमा अथक योद्धा
मैले अहिले सम्म कुनै निर्वाचन हारेको छैन : कुसुम कुमार कार्की (उम्मेदवार ,प्रदेस क्षेत्र ,काठमाडौं ४ )
मैले जित्नेमा म पूर्णरुपमा आशाबादी छु : साधुराम खड्का (उम्मेदवार ,प्रदेस क्षेत्र काठमाडौं ४ )
सधैं मैले मात्र खेल्नुपर्छ भन्ने छैन् । नयाँ पुस्ताले अवसर पाउनुपर्छ- अनिल गुरुङ (फुटबल खेलाडी)